INETFLIX EJONGENE NENGQUMBO YENETIZENS YOKUSUSA AMADERRY AMANTOMBAZANA AMAXESHA AMA-2 KWIINTSUKU EZINE ZOKUKHUTSHWA EMVA KOKUKHUTSHWA - IINKQUBO ZETV
INetflix ilisusile ixesha lesibini lechungechunge lwehlaya leChannel 4 iDerry Girls kwinkonzo yayo e-UK naseIreland.
INetflix ilisusile ixesha lesibini kuthotho lwamahlaya eChannel 4 Amantombazana eDerry kwinkonzo yayo e-UK nase-Ireland. INetflix yayiqale yaqinisekisa ukufika komboniso nge-tweet: IDerry Girls S2 ngoku ikwiNetflix ukuba ubufuna isizathu sokuyibukela kwakhona. Ngokwengxelo, kamva yehlisile njengoko kwakusekuqaleni ukusungula ixesha lesibini ngoJulayi 9.
Kutyhilwe ukuba umboniso awunawo amalungelo enkqubo e-UK, kude kube lixesha lesithathu lokuqala. Ixesha lesithathu liphantsi kwexesha elide ngenxa yokuma ngenxa ye-COVID-19. Oku kuyenza icace eyokuba isizini 2 isenokungabuyeli kwiNetflix nanini na kungekudala. I-Netflix yase-UK kunye ne-Ireland zibhale i-tweeted, Okwangoku, [isizini 2] iyafumaneka kwiChannel 4.
Yenziwe nguLisa McGee kwaye yaveliswa nguHat Trick, uDerry Girls wayenze okokuqala ngoFebruwari 2018. Ibalisa ibali leqela labahlobo abakwishumi elivisayo kwisikolo sabo samabanga aphakamileyo samaKatolika. Olu luhlu lusethwe kwii-1990s zakuqala eDerry, eMantla eIreland.
Basabele njani abalandeli ekususweni kweDerry Girls Season 2?
Inkqubo ye- ukususwa kwexesha 2 Amantombazana eDerry ashiye abalandeli bevutha ngumsindo. Olu luhlu lwamahlaya luye lwasuswa kwinkonzo emva nje kweentsuku ezine.
Nanku ukujonga indlela abalandeli abasabele ngayo. Abalandeli bavakalise ukudana kwabo nge-tweet.
Kuyamangalisa ukuba elo xesha lesibini leDerry Girls linyamalele kwiNetflix. Ndiyazi ukuba iNetflix ihlala isusa kwaye ihlaziya umxholo [kodwa] ihlala iyishiya ixesha elide kuneentsuku ezi-4 !!! Nantsi enye yeetweets efundwayo.
Embindini wokubukela #DerryGirls isizini yesibini kwi @netflix kwaye yaphela nje, wongezwa omnye umlandeli weDerry Girls. Abalandeli bavakalise ukungavumi kwabo kuba bengakhange bafumane thuba lokusasaza ixesha elilindelweyo lonyaka 2.
Ngubani obuyela kwiDerry Girl season 2?
Ngexesha le-2 leDerry Girls, uPeter Campion, uKevin McAleer kunye noArdal O'Hanlon inkwenkwezi yeendwendwe kolu ngcelele. USooirse-Monica Jackson ubuya njengo-Erin Quinn. UNicola Coughlan udlala uClaire Devlin. UJamie-Lee O'Donnell udlala uMichelle Mallon. UJames Maguire, odlalwa nguDylan Llewellyn. Udade Michael wadlala nguSiobhan McSweeney. Kwaye, uLouisa Harland udlala u-Orla McCool.
Kwenzeka ntoni kwisiphelo sokugqibela seDerry Girls isizini 2?
Isiphelo samaDerry Girls amaxesha amabini amaziko ajikeleze utyelelo lukaMongameli wase-US (lo ngunyaka ka-1995) kwisixeko esiseMantla eIreland. Owona mzuzu wokumangaliswa yayinguJames (Dylan Llewellyn) wokudibana nabahlobo bakhe. Wayethathe isigqibo sokuyishiya idolophu yaseDerry, kodwa isigqibo sakhe sithatha i-U-turn. Abahlobo bahamba esihlweleni esihlanganisene ukuze sive uMongameli ethetha kwimpikiswano yezopolitiko e-Ireland ngo-1990.
Uthando olusakhulayo lukaJames kunye no-Erin lusembindini wexesha lesibini leDerry Girls. Oku kubhangqwa kanye kanye kukudinga kuthotho lwexesha laso esele liqinisekisiwe.
Amantombazana eDerry abuyela emva kwexesha lesibini, ngeli xesha likhulu kwaye linesibindi. Kodwa, kuya kuthatha ixesha ngaphambi kokuba ibuyele kwiNetflix. Kude kube emva koko ungasasaza isizini yokuqala kwiNetflix.
Iimuvi ezinje ngojohn wick 2
ngumxhuzulane uwela ukubuya
Indawo yemantombazana enomlingo isiqendu 3
Ixesha le-911 5 ukukhutshwa komhla wama-2021
Imayile 22 icandelo 2